कङ्गोमा रेल दुर्घटना, ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० पुग्यो « Khabarhub
कङ्गोमा रेल दुर्घटना, ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० पुग्यो
Overturned carriages lie near the rail track in Yanga, Congo-Brazzaville, on June 22,2010 after seventy-six people were killed in Monday’s rail disaster. The Congo-Brazzaville government on Tuesday issuedaprovisional toll of 48 dead and more than 400 injured in the accident, and said the search for more bodies would continue. The 510-kilometre (315-mile) CFCO line is the main link between the capital Brazzaville and Pointe Noire on the Atlantic. AFP PHOTO STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)
कंगो– अफ्रिकी मुलुक प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा भएको रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३० पुगेको छ ।
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको केसाई प्रान्तको प्रमुख शहर कनाङ्गाबाट १ सय ४० किलोमिटर उत्तरमा रहेको बेना लेका गाउँनजिक मालवाहक रेल दुर्घटनामा परको हो । दुर्घटनामा अन्य केही घाइते भएका छन् ।
लिकबाट बाहिर गएपछि रेल दुर्घटनामा परेको बताइएको छ । मालवाहक रेल दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा महिला तथा बालबालिका समेत रहेको अधिकारीले जनाएका छन् ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दुर्घटनामा २४ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा रेलमार्गका पूर्वाधार निकै पुरानो भइसकेको तथा जीर्ण अवस्थामा रहेकोले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा बेलाबेला रेल दुर्घटनामा पर्दै आएका छन् ।
कमजोर रेल मार्ग, अत्यधिक यात्रु तथा सामानको भार र चालकको लापरवाहीका कारण त्यहाँ रेल दुर्घटनामा हरेक वर्ष सयौँ मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०७५, सोमबार ६ : २२ बजे